Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 27/09/2020)
Waayo, kuwa aan horay war, Forest Black waa gobol wayn keymaha ah ee koonfur-galbeed Germany. More si gaar ah, waxa uu ku yaalaa gobolka Baden-Wurttemberg oo degan qayb weyn waxaa ka mid ah.
Black Forest The, ama Schwarzwald sida uu ugu yeedhay in Jarmal, leedahay meelo badan oo la views qurux badan dusha. Waxaa sidoo kale ka buuxsamay webiga cajiib ah dooxooyin iyo qoraxdu, danbow qurux badan ah oo kuraha badan oo aad halkan ka heli kartaa.
Waa maxay more, waxaad ka heli doontaa gobolka oo dhan qurux badan iyo ekayd u ​​eg sanadka oo dhan dheer! Taasi waa xaqiiqo dhab ah oo sababta oo ah waxa ay u muuqataa mid cajiib ah marka ay qoraxdu, roobaadka, iyo marka ay jiraan baraf. Waxaad arki kartaa in si cad ah oo ku saabsan sawirada ugu badan ee deegaanka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/black-forest-by-train/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)